ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီး၊ ပါမောက္ခ၊ အရေပြားဌာန၊ မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီး
အကြောပြတ်ရာထင်တဲ့အခါ သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲ
—–၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကလေးမွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဝနေရာကနေ ဝိတ်လျှော့လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းအပြင်းအထန် လုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောပြတ်ရာတွေ ထင်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အကြောပြတ်ရာထင်တဲ့အခါ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတာကြောင့် သက်သာလျော့ပါးအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။ A. အကြောပြတ်ရာက ဖုံးထားလို့ရတဲ့ အရေပြားနေရာတွေဆိုရင်တော့...
—–၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ဘယ်လိုနေထိုင်မှုပုံစံတွေက အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကို ဖြစ်စေပါသလဲ။ A. Lifestyle ထဲမှာ ရေကူးတဲ့သူတွေဆိုရင် အရေပြားပိုခြောက်သွေ့တတ်ပါတယ်။ ရေထဲမှာ အကြာကြီးစိမ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူဆိုရင်လည်း အရေပြားခြောက်သွေ့မှုများတယ်။ ပန်းကန်တွေအများကြီးကို လက်အိတ်မပါဘဲ ဆေးရတဲ့သူတွေမှာလည်း လက်အရေပြား...
—–၊ ပါမောက္ခ မြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—– Q. အရေပြားမှာ အနာဖြစ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအခြေအနေဆိုရင် ဆရာဝန်ပြသင့်ပါသလဲ။ UP (FB) A. အနာက သိပ်နာပြီး ရောင်နေရင်၊ ကိုင်ကြည့်တဲ့အခါ ပူလာပြီး ဖိကြည့်တဲ့အခါ နာနေရင်၊...
—၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) ၊— Q. ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အကြောင်း ရှင်းပြပေးပါ ဆရာ။ A. နေရောင်ခြည်လို့သာ ခြုံငုံပြီး ခေါ်နေကြပေမယ့် အဲဒီရောင်ခြည်ထဲမှာ လူတွေရဲ့ မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ ရောင်ခြည်တွေနဲ့အတူ မမြင်နိုင်တဲ့ ရောင်စဉ်ရောင်တန်းတွေလည်း အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ...
……၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊…… Q. မှဲ့အမျိုးအစား ဘယ်နှစ်မျိုးရှိပါသလဲ သိချင်ပါတယ်။ NanNan(FB) A. မှဲ့အမျိုးအစားတွေကတော့ – Junctional nevus – အရေပြားအပေါ်လွှာရဲ့ အောက်ခြေရှိမှဲ့ Compound nevus –...
————၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊————– Q. ခေါင်းလျှော်ရည်တစ်မျိုး ပြောင်းသုံးလိုက်တာ ဗောက်ထလာပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်ကြောင့် ဗောက်ထနိုင်ပါသလား။ MT(FB) A. ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့မတည့်တာ၊ ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါ ပြောင်အောင်မလျှော်တာ၊ ခေါင်းလျှော်ရည် ပြင်းလွန်းတာတွေကြောင့် ဦးရေပြားခြောက်သွေ့တဲ့အခါတွေမှာ ဗောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။